Waxaan caawinaa adduunka oo koraya ilaa 2012
Jawaab celin ka bixi
Electrode graphite ee uurka leh
Naasaha naasaha graphite electrode
Dukaanka wax soo saarka
Wac Taageerada +86-13212161818
Taageerada iimaylka yidongcarbon@163.com
Qiimaha korantada graphite ayaa sii kordhaya.
by admin 21-11-09
Labada dhinac ee sahayda iyo dhinaca kharashka labaduba waa kuwo togan, iyo qiimaha suuqa ee electrodes graphite ayaa sii kordhaya. Maanta, qiimaha graphite electrodes ee Shiinaha ayaa kor loo qaaday. Laga bilaabo Noofambar 8, 2021, celceliska qiimaha korantada garaafyada caadiga ah ee Shiinaha wuxuu ahaa 21,821 yuan/ton, koror ...
Falanqaynta suuqa graphite electrode ee Shiinaha iyo saadaasha aragtida suuqa.
by admin 21-08-26
Falanqaynta suuqa elektiroonigga ah ee graphite qiimaha: Dabayaaqadii Luulyo 2021, suuqa garaafyada elektiroonigga ah wuxuu galay kanaalka hoos u dhaca, iyo qiimaha korantada garaafyada ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacay, iyadoo wadarta guud ay hoos u dhacday 8.97%. Inta badan sababtoo ah kororka guud ee sahayda garaafka ...
Suuqa ugu dambeeyay ee graphite electrode (7.18)
by admin 21-07-19
Qiimaha suuqa elektiroonigga ah ee Shiinaha ayaa ahaa mid deggan toddobaadkan. Waxaa la fahamsan yahay in ay sabab u tahay hoos u dhaca joogtada ah ee dhawaanahan qiimaha kookaha baaruud-hooseeya iyo xaqiiqda ah in qaar ka mid ah birta birta ee hoose ee electrodes graphite ay leeyihiin qadar yar oo ah kaydka electrodes graphite, hoos u dhaca ...
Qiimaha coke cirbadaha ayaa kordhay bishii Luulyo, korantada garaafyada hoose ee qulqulka ayaa kor u kacay 20%.
by admin 21-06-24
Maaddaama qiimaha macdanta birta uu kor u sii kacayo, qiimaha birta foornada qarxinta ayaa kor u sii kici doonta, iyo faa'iidada kharashka birta foornada korontada oo la isticmaalayo birta qashinka ah sida alaabta ceeriin ay ka muuqato. Muhiimadda maanta: Qiimaha UHP600 ee suuqa graphite electrode ee Hindiya ...
Si lama filaan ah: Qiimaha graphite electrode ee Hindiya wuxuu kordhin doonaa 20% rubuci saddexaad.
by admin 21-06-17
Sida laga soo xigtay warbixinadii ugu dambeeyay ee dibadda, qiimaha UHP600 ee suuqa graphite electrode ee Hindiya wuxuu ka kici doonaa 290,000 rupees/ton (3,980 US dollars/ton) ilaa 340,000 rupees/ton (4670 US dollars/ton). Muddada dilku waa Julaay ilaa Sebtembar 21. Sidoo kale, qiimaha HP4...
Kordhinta kharashyada iyo faa'iidada aan ku filnayn, qiimaha graphite electrode ayaa weli la filayaa inuu kordho.
by admin 21-06-08
Dulmarka suuqa: Qiimaha suuqa ee graphite electrode ayaa ahaa mid xasiloon todobaadkan. Toddobaadkan, qiimaha kookaha batroolka-hooseeya, alaabta ceeriin ee kor u kaca ee electrodes graphite, ayaa joojiyay hoos u dhaca iyo xasilinta. Saamaynta xun ee dusha alaabta ceeriin ee electrodes graphite daciifay, iyo t ...
Suuqa ulaha elektiroonigga ah ee garaafyada adduunka ayaa la filayaa inuu markhaati u noqdo koboc aad u weyn. Warbixintii ugu dambeysay ee cilmi baarista, saadaasha 2028
by admin 21-06-04
Aragtida Kobaca Warshadaha (IGI) ayaa sii daayay warbixintooda cilmi baarista suuqa ee ulaha garaafyada cusub iyo saadaasha warshadaha sideedda sano ee soo socota. Shirkaddu waxay saadaalisay in marka la gaaro 2028, baahida caalamiga ah ay kori doonto XX%, suuquna wuxuu ku kori doonaa kobaca sanadlaha ah ee isku dhafan ee XX%. Iyadoo tan pr...
Shirkaddayadu waxay si rasmi ah dib ugu bilowday shaqada iyo wax soo saarka.
by admin 21-03-30
Bandhiga gu'ga wuu dhamaaday, suuqa garaafyada elektiroonigga ah ayaa sii waday kor u kaca joogtada ah. Shirkadeena waxay si rasmi ah dib ugu bilawday shaqada iyo wax soo saarka Febraayo 24, 2021, waxaan ka baaraandegi karnaa tilmaamo kala duwan oo awood caadi ah, awood sare, iyo koronto garaafyada ultra-sare leh. Qu...
Suuqa elektiroonigga ah ee graphite ayaa ilaalin doona kor u kaca joogtada ah.
by admin 21-03-19
Inkasta oo suuqa graphite electrode uu ku jiray wareeg lix bilood ah oo kor u kaca, shirkadaha graphite electrode ee hadda jira ayaa wali ku jira xaalad jaban sababtoo ah kor u kaca alaabta ceeriin. Marxaladdan, cadaadiska qiimaha suuqa graphite electrode waa mid caan ah, iyo qiimaha o ...
Ku Kulmo Bandhigga Warshadaha Caalamiga ah ee 25aad, 2019
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd ayaa ka qaybgalay Bandhigga Warshadaha Caalamiga ah ee 25aad, 2019 ee Ruushka. Haddaanu nahay soo saaraha graphite electrodes-ka xirfadleyda ah, waxaan jeclaan lahayn inaan u siino macaamiishayada alaabada iyo adeegga heerka koowaad oo aan noqono alaab-qeybiye lagu kalsoonaan karo
Bishii Noofambar 2019, iibsadaha garaafyada elektiroonigga ah ee Ruushka ayaa yimid Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.
Bishii Nofembar 2019, iibsadaha graphite electrode ee Ruushka ayaa u yimid Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. Guddoomiyaha guddiga ayaa macaamiisha ku weheliyay si ay u booqdaan warshadda oo si faahfaahsan u horudhac u ah horumarinta shirkadda .Waxaan si dulqaad leh uga jawaabnay su'aalaha macaamiishayada iyo pr...
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. ayaa si rasmi ah u bilowday aqoon-is-weydaarsi cusub oo kalcining ah Oct.18th,2020.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. waa soo saaraha korantada garaafyada xirfadlayaasha ah. Tan iyo markii la aasaasay warshadda cusub, guddoomiyaha guddiga ayaa si shakhsi ah u hogaaminayey qorsheynta iyo naqshadeynta, kormeerka iyo maamulka. Ugu dambeyntii, dhismaha warshadda ayaa si habsami leh loo soo gabagabeeyay.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. waa soo saaraha graphite electrode xirfadeed iyo dhoofiye ilaa 2012.
Suuqa graphite electrode ee Shiinaha ayaa...
Qiimaha coke cirbadaha ayaa kordhay bishii Luulyo, hoos u dhac...
Si lama filaan ah: Electrod graphite ee Hindiya...